Tehold Chibage Mill Machine
Chibage cheChibage, chinova chirongwa chine budiriro yevanhu, hupfu hwechibage hunosimudza vanhu uye hunounza mabhenefiti. Chibage Flour Machine kukurumidza kusimukira mune zvekurima dzakasimukira nyika, isu tinogadzira chibage hwokugaya hwakabvira muchina makore gumi kubva 2008.The nzanga ikozvino mhoro ...
Nzira Yokuita Nayo Yakanaka Hupfu Mill Bhizinesi Rekuronga Mune Hupfu Kugadzirwa
Muchina wakasarudzika weupfu wemuchina waunza shanduko muhupfu hwekugaya zvirimwa, mumusika weupfu weChina. Iyo hombe furawa yekugaya chirimwa inoita kunge yatora chikamu chikuru, uye hazvisi izvo chete nekuda kwekuwanda kwekugadzirwa, vane zvakawanda zvakanyanya kuomesa ...
Yemazuva ano roller yekugaya iri chaizvo, uye chaizvo mushe, yakagadzirirwa kubvisa hupfu chena hwakawanda sezvinobvira kubva kune yega tsanga
Kugaya kwechinyakare ndiyo chete nzira yekuona kutendeka, mhando, kuravira uye kukosha kweupfu. Izvi zvinodaro nekuti zviyo zvakakwana zvinokuyiwa mune imwechete yekupfuura nepakati pematombo maviri akatenderera, akatenderera, achichengetedza nekubatanidza mafuta egorosi. Maitiro akareruka ari pahea ...
isu tinogara takabata shungu uye kuda kukubatsira kutanga bhizinesi rako rekugaya hupfu nekuve nechibage chigayo kana gorosi furawa chigayo
Seimwe yemasangano ehupfumi ari kukura nekukurumidza, Africa iri kutamba basa rinonyanya kukosha munyika. Sedzimwe nyika, kurima kwakakosha zvakanyanya kurudzi, hapana chakasarudzika mu Africa, uyezve, kurima kwakakosha munyika zhinji dze Africa. Asi ...
Chibage uye zvigayo zveupfu hwegorosi zviri pasina kana mubvunzo imwe yenzira dzakanakisa dzekurarama zvakanaka uye kubatsira muKenya
Nepo kurima kwekurima kushoma, huwandu hwevanhu veKenya zvakadaro huri kukura. Izvi zvinounza matambudziko akakomba mukuwaniswa kwechikafu munyika, vanhu vazhinji vanowana rubatsiro rwechikafu gore rega. Kupa chikamu kuzvikafu zveindasitiri haisi chete nzira yekuchinja hupenyu hwako asi hunhu hwekuita ...
Kushanda Nheyo Yeupfu hwokugaya Machine
Hupfu hwokugaya hwakabvira muchina muhombe chidzitiro anoshandisa zviyo grading, muchina unobereka panguva imwe chete matatu makwara, kudyisa magumo ari elliptic, nechepakati chikamu idenderedzwa uye ipapo kuburikidza diki denderedzwa kuchinja kuti buditsa magumo, ari dzinofungidzirwa mutsetse reciprocating inofamba. Iyo ine uniq ...
Zviyo kugadzira chiito chekubvisa tsvina, kugadzirisa hunyoro, husking, peeling nekukuya izvo zvakagadzirwa kuita zviyo kana hupfu zvigadzirwa zvezviyo zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzemhando. Yakanatswa zviyo, senge hupfu hwemupunga, hupfu hwegorosi, furawa yechibage uye ...